Yamba Views Apartment - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Mark And Yoshiko
U-Mark And Yoshiko Ungumbungazi ovelele
Ibukeka phakade endaweni ephambili yase-Yamba esiqongweni segquma futhi ngaphesheya nje komgwaqo ukusuka e-Pacific Hotel kanye ne-Main Beach enhle ye-Yamba. Ifulethi liyingxenye yebhilidi elikhulu elinamanye amagumbi ezivakashi futhi lilungiswe kahle ukuze lenze konke okusemandleni ukuphila olwandle. Kuyifulethi elizimele elingu-3 Bedroom futhi line-ensuite kanye ne-balcony yawo wonke amagumbi okulala nendawo enkulu yokuhlala ene-WiFi yamahhala eyenza ibe ilungele iholide lomndeni noma labangane.
Ngobusika obupholile kanye nehlobo elide, elipholile, i-Yamba iyindlela enhle yokubalekela unyaka wonke. Phequlula amabhishi angagcwele abantu avumelana nazo zonke izimo, thatha uhambo lokuhamba nge-kayaking futhi ubhekane ngqo namahlengethwa asendle endaweni yomfula, ubhukude eziphethwini zemvelo zamachibi ase-Angourie aluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza noma uthathe i-Clarence River Ferry ukuze uthole uhambo oluhle noma isevisi yabagibeli. ukuya e-Iluka, ohlangothini olusenyakatho.
Abalandeli bokudoba bangakwazi ukubamba izinhlanzi eziningi ogwini, echwebeni, ematsheni noma ngisho nokudoba olwandle olujulile njengoba kudumile nalapha.
Kunamapaki eduze komfula amapikiniki, inkundla yegalofu enhle futhi uhamba ngezinyawo uye ezindaweni zendawo, njenge-Yamba Lighthouse kanye nohambo lwase-Yuraygir ogwini oluya eningizimu kulandela izindlela zasendulo ze-emu e-Yuraygir National Park. Idolobhana lakhiwe lizungeze ipaki likazwelonke, futhi, futhi imikhomo yama-humpback ifakwa embukisweni ongekho ogwini ngesikhathi sokufuduka kwawo kwaminyaka yonke phakathi kukaMeyi noNovemba.
I-Yamba iyindawo elula yokuzibekela emuva lapho uzothanda khona ukuzilibazisa futhi ujabulele iholide lakho nomndeni wakho nabangane.
Ifulethi lihlanganisa lo muzwa noLwandlekazi iPacific phezu komgwaqo futhi ukulungiswa kancane kuyenza isebenziseke kakhulu futhi inethezeke.
Amakamelo okulala angu-3 - Igumbi lokulala lokuqala elinombhede wendlovukazi, ingubo kanye ne-ensuite, igumbi lokulala lesibili nelesithathu linengubo yalo, i-ensuite kanye nombhede ophindwe kabili kanye negumbi lesine eline-combo yombhede ophindwe kabili nowodwa kanye nengubo yayo kanye ne-ensuite. . Indawo yokuhlala ebanzi nezindawo zokudlela, ikhishi eligcwele kanye nelondolo yangaphandle, indawo yokuhlala ene-BBQ, izindawo ezinotshani obungaphandle nendawo yakho yemoto ngaphansi kwesakhiwo nangaphandle kwesimo sezulu.
Uma usufikile efulethini futhi upake imoto yakho ungabeka okhiye bakho kude!
Ukuhamba ngezinyawo okuyimizuzu emi-2 nje ukuya esihlabathini kanye nokuntweza emanzini e-Main Beach kanye nezitolo zasendaweni, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela, ngakho-ke ukuhamba ngezinyawo futhi kwenza isikhathi sakho lapha sibonakale sikhululeke nakakhulu njengoba uhamba ngomkhumbi ubuhle bemvelo obuzungeze idolobha.
I-Yamba iqhele ngebanga elingu-7hr ukuya enyakatho ye-Sydney futhi cishe nehora lama-3 ukushayela eningizimu ye-Brisbane. Ungakwazi futhi ukundizela eClarence Valley Regional Airport eduze kwaseGrafton, uhambo lwehora elilodwa ukuya eningizimu-ntshonalanga.
I-Yamba iyidolobha elithulile ogwini lwe-NSW olusenyakatho namabhishi amahle nendawo ezungezile. Ifulethi lokubuka i-Yamba lisendaweni ekahle edolobheni, linezindawo zokudlela eziningi zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela eziqhelelene nje nefulethi futhi linehhotela lasePacific elingaphezu komgwaqo elinokubukwa okuhle nobhiya obandayo kakhulu edolobheni. Kukhona nesinema phezu komgwaqo futhi!
Ibungazwe ngu-Mark And Yoshiko
Sinabaphathi abasendaweni esakhiweni esiseduze ukuze ukwazi ukubacela noma yiluphi usizo uma uludinga, ngisho noma lulula njengezikhombisi-ndlela ezimbalwa noma ithawula elengeziwe :)
UMark And Yoshiko Ungumbungazi ovelele